पिउनेपानीको जारमा जिउँदो जुका भेटियो, के जारको पानी पिउनयोग्य छ त ? (भिडियोसहित) – Ktm Dainik
पिउनेपानीको जारमा जिउँदो जुका भेटियो, के जारको पानी पिउनयोग्य छ त ? (भिडियोसहित) - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
पिउनेपानीको जारमा जिउँदो जुका भेटियो, के जारको पानी पिउनयोग्य छ त ? (भिडियोसहित)
बिहीबार, फाल्गुन २९ २०७६
काठमाडौं । हामी कुनै रेष्टुरेण्टमा गयौँ र पिउनेपानी माग्यौँ भने उनीहरुले जारको पानी भन्ने जवाफ दिन्छन् । हामी पनि कस्तो पानी हो भनेर सोध्छौँ र जारको पानी भन्ने सुनेपछि ढुक्क भएर पानी पिउछौँ । तर के जारको पानी पिउनयोग्य नै हुन्छ त ?
यो भिडियो बिहीबार काठमाडौंको बनस्थलीमा खिचिएको हो । बनस्थलीको रीता खाजा घरका सञ्चालक केदारनाथले पिउनयोग्य हुने भन्दै जारको पानी मगाएका थिए । अक्वा नाइन्टी नाइन (अक्वा ९९) नाम रहेको जारको पानी उनले लामो समयदेखि प्रयोग गर्ने गरेका थिए र बिहीबार पनि त्यही पानी मगाएका थिए । पहिले पहिले उनले जारको पानीलाई त्यति नियालेर हेर्ने गरेका पनि थिएनन् । तर बिहीबार भने पानीको जारको माथि नै जिउँदो जुका हिँडिरहेको देखे ।
सिल नै नतोडिएको पानीको जारभित्र जिउँदो जुका हिँडिरहेको देखेपछि उनले रातोपाटीलाई सम्पर्क गरे ।
प्रशोधित पिउने पानीमै जिउँदो जुका भेटिएको सम्बन्धमा कुरा गर्न त्रिकोण वेभरेज इण्डिष्ट्रजका सुपरभाइजर राजु मानन्धरलाई सम्पर्क गर्दा आफू काठमाडौं बाहिर भएकाले केही थाहा नभएको भन्दै के भएको हो बुझेर मात्रै भन्नसक्ने बताए ।